ကျောက်ကပ် ရောဂါရှိတယ်။ ဘာတွေရှောင်စားရမလဲ……. – DVB
ကျောက်ကပ် ရောဂါရှိတယ်။ ဘာတွေရှောင်စားရမလဲ…….
Published By DVB | 20 January, 2020
ဆီးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ သွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကျောက်ကပ် ထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်။ ဒီလို ကျောက်ကပ် ပျက်စီးနေတာကြောင့် အနေအထိုင် အစားအသောက်ဂရုစိုက်ဖို့လိုလာတယ်။ အစားတလုတ်ကြောင့် ကျောက်ကပ်ကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာတွေရှောင်စားရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ သူလေးတွေရှိရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်နော်။
နံရိုးတွေရဲ့အောက်ဘက်နားမှာရှိတဲ့ လက်သီးဆုပ်အရွယ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းပါ။ ကျောရိုးရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာရှိကြပါတယ်။ကျောက်ကပ်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလုပ်အများဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ရဲ့ အဓိကတာဝန်က ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတာပါ။သွေးတွင်းက အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း သန့်စင်ပေးပါတယ်။ စစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဆီးအိမ်ထဲမှာ သိမ်းထားပြီး ဆီးအဖြစ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကို စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေအပြင်ကျောက်ကပ်က ကိုယ်တွင်း pH ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသလို သွေးနီဥဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အရိုးတွေသန်မာစေပြီး ကြွက်သားတွေ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်လည်း ကယ်လ်ဆီယမ်ကို စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ ဗီတာမင် D ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဒီလောက်တာဝန်အများကြီးကို ယူထားမှတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာဖို့အတွက်ကျောက်ကပ်ကျန်းမာဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ်ဆိုတာထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာမလိုအောင်ပါ။
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေပြီဆိုရင် အခုလိုလက္ခဏာတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းသေချာ မရှိဘဲ ပင်ပန်းနေမယ်
မျက်အိတ်တွေ မို့နေမယ်စတဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးအားနည်းနေပါပြီ။
ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအစားအစာတွေက မစားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အရောင်ရင့်တဲ့ ကိုလာ ကိုလာက အရောင်ရင့်လေလေ ကယ်လ်လိုရီနဲ့သကြား ပါဝင်မှုမြင့်သလို phosphorus ပါဝင်မှုလည်းများပါတယ်။ တာရှည်ခံဆေး နဲပ ဆိုးဆေးတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတွေက စွဲလမ်းစေနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း phosphorus ကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်တက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ကျောက်ကပ် နဲ့မသင့်တော်တာကတော့ အမှန်ပါ။ ဒါ​ကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိနေမယ် အရောင်ရင့်ရင့် ကိုလာတွေကိုရှောင်စေချင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးမှာ အာဟာရပါဝင်မှုမြင့်သလို နှလုံးကျန်းမာစေတဲ့ အဆီ၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစားတစ်မျိုးဆိုပေမယ့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိနေသူတွေအတွက်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ထောပတ်သီးက အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်သလို ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုကလည်း မြင့်ပါတယ်။
ဆီသွတ်ဗူးတွေက စားရတာအဆင်ပြေတယ်။ မြန်လည်းမြန်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်ပါတယ်။ ဒီ ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသလို ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီသွတ်အစားအစာတွေကို ရှောင်စေချင်ပါတယ်။
ဂျုံကြမ်း ပေါင်မုန့် ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ အာဟာရပြည့်ဝသလို အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုလည်း များပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်က ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မငမြင့်သလို ပိုတက်ဆီယမ်လည်းတော်တော်လေးပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဂျုံကြမ်း ပေါင်မုန့်အစား၊ ပေါင်မုန့်အဖြူကိုပဲစားပေးပါ။ ဆန်လုံးညို
ဆန်လုံးညိုမှာ ဆန်ဖြူထက် ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ phosphorus ပါဝင်မှုများနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆန်လုံးညိုမစားပါနဲ့။
ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေ မစားသင့်ပါဘူး။ ငှက်ပျောသီးအပြင် တရုတ်ဇီးသီး၊ နာနတ်သီးတို့ကလည်း ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။
နို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ဗီတာမင် နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာမှန်ပေမယ့် ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတာက ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိနေသူတွေအတွက် တကယ်ကို မသင့်တော်ပါဘူး။
လိမ္မော်သီးက ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသလို ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုလည်း မြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိနေတယ်ဆိုရင် လိမ္မော်သီး မစားပါနဲ့။
ပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေမှာ ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်သလို တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ၊ ဆိုးဆေးတွေ တော်တော်များများပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတွေက ကျန်းမာတဲ့သူတေါအတွက်တောင် ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ပြုပြင်ထားတဲ့ အသားတွေ မစားပါနဲ့။
ဒါတွေအပြင်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ စွန်ပလွံသီး၊ စပျစ်သီးခြောက်လိုမျိုး အသီးခြောက်တွေ၊ အချဉ်စိမ်ထားတဲ့အရာတွေ၊ ဆားရည်စိမ်ထားတဲ့အရာတွေ၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက်တို့ကို မစားသင့်ပါဘူး။
ရေးသားသူ Aye Thi Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။